AFAR Ciyaaryahan Oo Man United Laga Diri Karo Maalmaha Soo Socda & Qaabka Ay U Iibin Karaan Walow Suuqa Yurub Xidhmay - Gool24.Net
AFAR Ciyaaryahan Oo Man United Laga Diri Karo Maalmaha Soo Socda & Qaabka Ay U Iibin Karaan Walow Suuqa Yurub Xidhmay
Manchester United ayaa aad ugu mashquulsanayd maalintii ugu dambaysay suuqa kala iibsiga ee xagaagan 2020 iyagoo sameeyay afar saxeex shalay oo kaliya.
Liiska xiddigaha Manchester United ayaa hadda u muuqda mid sidii hore ka wanaagsan walow ay jiraan xiddigo badan oo macne la’aan wali ugu jiraa.
Man United ayaa awooday in xiddigaha kooxdeeda qaar kamid ah amaah ku dirto intii uu suuqu furnaa halka uu Chris Smalling daqiiqadihii ugu dambeeyay suuqii xalay xidhmay heshiis 13.5 Milyan Pound ah ugu biiray AS Roma.
Wali waxa ay shaqo badani u taalaa Ole Gunnar Solskjaer isagoo xiddigaha qaar uusan u baahnayn ka iibin kara kooxaha EFL-ka ee heerka labaad ee England maadaama suuqa gudaha England uu furnaan doono ilaa 16-ka bishan October.
Afar xiddig oo lagu sifeeyay kuwa oo Ole u diri karo kooxahaas ayaa kala ah Marcos Rojo, Phil Jones, Sergio Romero iyo Lee Grant.
Romero ayaa ka cadhaysan in Manchester aysan u fasixin Everton oo shalay saxeexiisa doonaysay kaddib markii uu dookha saddexaad ee xulashada goolhayayaasha Man United noqday halka uu Grant xulashada afraad yahay.
Man United ayaa sidoo kale amaah ku siin karta Jones iyo Rojo kooxaha heerka kale maadaama ay adkaan doonto in ay ka iibsadaan sababtoo ah in mushaharaadkoodu badan yahay.